१. आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यबाट आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको परिचय
२. आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको सीमा
३. राम्रो स्वास्थ्यको लागि आध्यात्मिक उपचारको महत्तव
४. आउने समयमा चिकित्सा विज्ञान भन्दा अधिक आध्यात्मिक उपचारको महत्व
अनादि कालदेखि रोग एवं रोगको उपचारको अध्ययनले मानव जातिलार्इ आकर्षित गरेको छ । आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जस्तै एलोपैथी, रोगोपचारको लागि प्राथमिक विधिको रुपमा व्यापक स्वीकृति एवं ख्याति अर्जित छ । आधुनिक औषधि क्षेत्रमा प्रगतिले विभिन्न रोगको शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट गरेको छ । तथापि, यो पनि सत्य हो कि धेरै रोगहरुको कारण अझै पनि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पूर्णतया बुझ्न सकेको छैन ।
यो बुझ्न महत्तवपूर्ण छ कि कुनै रोगको स्पष्ट कारणहरु के हो, जस्तै रोगको उपचार; यो बुझ्न पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ कि दुर्इ मध्य एक व्यक्ति बिरामी किन हुन्छ, जहाँ दुवैलार्इ रोगले समात्ने अवसर बराबर थियो । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले प्रथम बिन्दुबारे धेरै बताउँछ, तर दोस्रो बिन्दुको बारेमा अधिक वर्णन गर्नमा असमर्थ छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञान धेरै पटक रोगको उपचारको अर्थ रोगको लक्षण अथवा सूचकको उपचार गर्दछ । यसकारण धेरै रोगहरुका लक्षणहरुलार्इ दबार्इएता पनि जीवन काल भरी उपचार निरन्तर गर्नुपर्छ; जसले लक्षण दबार्इ रहन्छ, यसले वास्तविक रोगको उपचार हुँदैन । किन कि यसको कुनै स्थायी उपचार हुँदैन, रोगको उपचारबाट हुने दुष्प्रभावको साथ-साथै रोगबाट उत्पन्न शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाब पनि सहनु पर्छ ।
पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली आयुर्वेद यो बताउछ कि रोगको कारण तीन स्तरमा हुन सक्छन्, जस्तै शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक । SSRF को आध्यात्मिक अनुसन्धानको माध्यमबाट यो ज्ञात भयो कि रोगको मूल कारण मुख्यत: आध्यात्मिक स्वरुपको हुन्छ । वास्तवमा व्यक्तिको कुनै विशिष्ट रोग हुनुको मूल कारण ८०% सम्म आध्यात्मिक स्वरुपको हुन्छ । यी आध्यात्मिक कारणहरुमा व्यक्तिको भाग्य, कर्म, मृत पूर्वज अथवा अनिष्ट शक्ति (भूत, राक्षस, दानव आदि) सम्मिलित हुन सक्छन् । प्रत्येक व्यक्तिको आध्यात्मिक कारण भिन्न हुन्छ । यही कारण हो कि दुर्इ व्यक्ति मध्य एक रोगी हुन जान्छ, जबकि दुवैलार्इ रोग लाग्ने समान अवसर थियो ।
साधना एवं आध्यात्मिक उपचार, आध्यात्मिक मूल रोगबाट मुक्त हुनको लागि एक महत्तवपूर्ण साधन हो । व्यक्तिको रोगको आध्यात्मिक कारण बुझ्न अथवा अनुभव गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले रोगी व्यक्ति निर्धारित चिकित्सकीय उपचारको साथ-साथै आध्यात्मिक उपचार जारी राख्नुपर्दछ । जब व्यक्ति साधना गर्छ तब उनको आध्यात्मिक स्तर बढ्न थाल्दछ अनि उनको आध्यात्मिक संरचनामा आन्तरिक बदल हुन थाल्दछ । यसले मन अनि शरीरलार्इ पनि असर गर्दछ । यसको लाभ यो हो कि, रोगबाट अथवा त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्य समस्यामा सुरक्षा वृद्धि हुन जान्छ । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्ति रोगको सम्पर्कमा आएता पनि रोगको कारण हुने शारीरिक एवं मानसिक कष्टबाट साधना नगर्ने व्यक्तिको तुलनामा कम प्रभावित हुन्छ । साधना एवं आध्यात्मिक उपचार न केवल रोग ठीक गर्छ, यसले व्यक्तिको मनको आध्यात्मिक शुद्धि अनि उनलार्इ अधिक निस्वार्थ बनाउनमा सहायता गर्दछ ।
विश्व यस समय अस्थिर स्थितिमा छ । अनेक सन्तहरुले आफ्नो भविष्यवाणीमा अगामी केही वर्षमा तेस्रो विश्व युद्ध अनि अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाको संभावना बताउनु भएको छ । परिणामस्वरुप अनेक आधारभूत वस्तुहरुको कमी हुनेछन् । कारखानाहरु बन्द हुनेछन् र चिकित्सा विज्ञानद्वारा निर्माण हुने अैषधि अनुपलब्ध हुनेछ । त्यस समय, रोगोपचारको लागि व्यक्ति आध्यात्मिक उपचार अनि उपलब्ध वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मा नै निर्भर रहनुपर्छ । यो दुष्टिकोणले, अहिले देखि नै आध्यात्मिक उपचार सिक्ने अनि अभ्यास गर्न आवश्यक छ ।
हेर्नुहोस् खण्ड – विभिन्न रोगहरु अनि विकारहरुको लागि आध्यात्मिक उपचारी जप’